6 makiyi ekuvandudza kudyara | Ehupfumi Zvemari
Chimwe chezvinangwa zvemumwe muzvinabhizimusi mudiki nepakati chinofanirwa kunge chiri chekuchengetedza nzvimbo dzavo mumisika yemari pamusoro pezvimwe zvinhu. Hazvishamisi kuti pane mari yakawanda yaunogona kurasikirwa mukufamba kwaunogona kuita panguva dzino chaidzo. Nekuda kwekusagadzikana kunogadzirwa mukuchinja kwemitengo yavo uye izvo zvinogona kutungamira kune misiyano yakatenderedza 5% kana kunyangwe neepamusoro masimba ekutsamira zvinoenderana nehunyanzvi chimiro chehunhu hwakaongororwa.
Saka kuti, nenzira iyi, zviitiko zvisingadiwe zvakanyanya zvinogona kudzivirirwa nevashandisi vemusika wemasheya, chinova chimwe chezvinangwa zvinofanirwa kukwidziridzwa pamusoro pechero imwe tekinoroji yekufunga. Mune nguva, senge dzazvino, kana mwenje wabuda pamisika yese yequity, zvisati zvaonekwa simuka muhuwandu hwehuwandu nezviremera zvemari zveyuro zone. Uye izvo zvinotungamira mukugadziriswa kwakakomba mumatunhu akachengetedzwa pamusika wemasheya munzvimbo ino inokosha yenzvimbo.
Nepo kune rumwe rutivi, hatigone kukanganwa kubva zvino zvichienda mberi kuti yambiro inofanira kuve iri dhinomineta mune zvese zvatinoita mumisika yemari. Chero chero chinhu chakasarudzirwa monetize mari mune dzimwe nguva dzakasarudzika dzekuenderana nenyika inogara yakaoma mari. Kuti izvi zvive nenzira iyi, hapana zvirinani pane kushandisa mamwe marongero echiito anogona kubatsira zvakanyanya mune chero mamiriro ezvinhu mumisika yemari.
1 Keys: tsvaga nezve kukosha
2 Tsvaga makambani akatsiga
3 Chengetedza chete izvo zvinodiwa
4 Usaise mari chete mukuchengeteka kumwe chete
5 Wongorora nzira dzehunhu
6 Nemaitiro mune yepamusoro
Keys: tsvaga nezve kukosha
Hapana mubvunzo kuti ichi chinhu chinofanirwa kukosheswa zvakanyanya nekuti chinokanganisa shanduko chaiyo yeiyo mari yekudyara. Kuti uwane ichi chinangwa chakakosha, zvichave zvakakosha kuti iwe utonge kufamba kwavo mumusika wemasheya kuti uzive kuti ndeapi maitiro anounza zvirinani zvehunyanzvi chimiro nguva dzese. Kusarudza avo vari mukukwira kwazvino kunovatendera kuti vasvike kumatunhu akakwirira mukuenderana kwemitengo yavo. Uye kana ichigona kuve pasi pechirevo chekusununguka, saka zviri nani pane zvatinofarira. Hazvishamise kuti ndiyo yakanakisa mamiriro ezvinhu kune vanoita mari.
Kune rimwe divi, zviri nyore kwazvo kuongorora mwero wechikwereti unogona kunge uine aya makambani akanyorwa. Pamusoro peiko kukura kwayo kugona kusvika pamutengo wakatemwa kare nedzimba dze equity musika ongororo. Ichi ndicho chimwe chezvinhu izvo zvisingatombofaniri kushayikwa pakusarudza akanakisa masheya pamusika wemasheya, angave ari enyika kana kunze kwemiganhu yedu. Nekuti inoisa mucherechedzo maitiro ekudyara pamatemu ese ekusingaperi: mapfupi, epakati nepakati.
Tsvaga makambani akatsiga
Izvo zvichave zvakare zvakakosha kwazvo kusarudza masheya anopa vashoma nevapakati varimi kutyisa kukuru. Ivo ndevokufungidzira Izvo hazvina kuitirwa kune akawanda kana mashoma mashandisirwo emari kubva kune avo maonero. Kana zvisiri, pane kudaro, inofanirwa kunongedzwa kumitsara yebhizinesi inogamuchirwa zvizere nemisika yemari nekuti chinhu ichi chine chekuita nekupa kugadzikana mukugadziriswa kwemitengo. Ichi chinhu chakakosha mukugadzirwa kweyakajeka uye yakaenzana mari yekudyara kubva kune ese maonero maonero.
Kune rimwe divi, hazvifanire kukanganwika kuti mhando dzekambani idzi hadziwanzo kuita kukudziridza kuwira kukuru mumisika yemari. Asi pane kudaro, chengetedza kugadzikana kukuru mumitengo yavo, kunyanya munguva dzakareba dzekugara kwavo. Naizvozvo, iri zano rinoshanda rekugadzira yakagadzikana kwazvo musika wemasheya portfolio zvishoma nezvishoma kuitira kuti kuchengetedza kubatsire nekudzivirirwa kukuru kuguta rakasimwa mumhando dzose dzezvigadzirwa zvemari, uye kwete chete mukutenga nekutengesa masheya muquity. misika.
Chengetedza chete izvo zvinodiwa
Imwe nzira yekudyara iwe yaunogona kushandisa kubva ikozvino kuenda kushandisa yakakwana. Usaedze kupa yakawanda kumabasa mukuita nekuti iwe unogona kuve nekushamisika kusinganzwisisike chero nguva. Nekuti iwe ungangoda mari mukutarisana nemubhadharo usingatarisirwe kana kutogadzirisa chikwereti pamberi pevamwe mapato. Nekuti zvakafanira kuti Iva nematiresi muakaundi yako yekutarisa kukudzivirira kubva kune zvimwe zvezviitiko zvatakasimudza muchinyorwa chino. Hazvishamisi kuti zvinogona kutungamira kwauri kuti uite zvinhu zvinotyisa izvo zvinoita kuti iwe urasikirwe nemari mumabasa emusika wemasheya anoitwa mune idzi zviitiko chaizvo.
Nepo pane izvo zvinopesana, iwe hauzove wakanangana nekurasikirwa kukuru mune yako mari chirevo. Hazvishamise kuti iwe unogona kusanganisa ako ekudyara nezvimwe zvakagadziriswa mari zvigadzirwa, senge yakatarwa-temu bhangi dhipoziti. Kunyangwe ivo vachizokupa iwe yakadzikira kwazvo kudzoka iyo isingatombo kumhan'ara isingasvike 1%, asi uine chivimbo chakazara chekuti hauzorasikirwe neiyuro imwe mumhando iyi yekudyara. Iyi ndiyo nzira iyo inowanzo shanda mushe padzimwe nguva yekusagadzikana kukuru mumisika yemari. Uye zvakare, hazvizokubhadharira chero chinhu kuti uzviite kubva zvino zvichienda mberi.
Usaise mari chete mukuchengeteka kumwe chete
Hapana mubvunzo kuti kuita investa kuburikidza neyemari nhumbi chikanganiso chikuru chaunogona kubhadhara zvakanyanya. Tatarisana nemamiriro ezvinhu aya, imwe yekiyi irimo mukugadzira dengu remasheya kana zviwanikwa zvemari nechinangwa chekutanga chekuchengetedza kukosha kwemipiro yemari yaitwa. Kune rimwe divi, iri nyore nzira yeku shandura izvo zvasara pamusoro uye pamusoro pezvimwe zvinoverengeka zvekufungisisa uye pamwe zvakare kubva pakuona kwedata rako rakakosha. Nezve zvimwewo, hapana mubvunzo kuti iwe unotora njodzi shoma shoma kupfuura izvozvi, zvinova, shure kwezvose, chii chiri manejimendi ichi.
Iwe haufanire kuita zano iri mukati memisika yemari. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unogona kuzvimisikidza pamwe nezvimwe zvemari zvinhu, kusanganisira izvo kubva kune yakatarwa mari uye kunyange kubva kune mamwe mamodheru ekudyara. Zvekuti iwe haugone kurasikirwa nemari mune imwe kudonha swoop sezvazvinowanzoitika kana iwe ukaisa yako mari mune imwechete yezvemari kuchengetedzeka kana nhumbi apo njodzi mukuita basa dzinokwira neimwe kumanikidza. Sezvo iwe uchizokwanisa kuongorora mune mashandiro awakamboita mumakore apfuura uye uine chokwadi chese kuti iwo angave asina kunge akanakira iwe pachako zvido zvako. Kana zvisiri izvo zvinopesana, sezvaunogona iwe panguva ino kupupura.
Wongorora nzira dzehunhu
Ehezve, iri zano rakasarudzika rinobatsira kwazvo mukuvandudza mashandiro emusika wemasheya, kunyangwe iine zvakare njodzi yekuti havazi vese vashoma uye vepakati-varairidzi vanoziva maitiro ekuzviita neruzivo. Nekudaro kukosha kwekuve neruzivo rwakanyatsojeka rwekuti iwe unofanirwa kufambisa sei mashandiro aya mumisika yemari. Zvichava zvakakosha kuti utenge izvo zvinosangana nemamiriro aya. Chidiki diki chekuita iyi yekudyara system inoenderana nechimwe chinhu chakakosha sekuti kukosha kunofanira kunge kuri pazasi pamusoro zvake avhareji yemazuva makumi mashanu kana zana. Kushanda kwaro hakuwanzo kutadza, zvisinei nenguva yekugara kwaunotungamira mari yako.
Nepo kune rimwe divi, imwe hunyengeri iyo inogona kushandiswa kugadzira izvi kutenga mumisika yemari inosanganisira kutenga akawandisa masheya. Mune mamwe mazwi, ivo vakadonha zvakanyanya mumisangano yekupedzisira yemusika wemasheya uye nekudaro vane mamiriro ezvinhu akanaka ekudzokororazve nekwaniso yakakura yekuti kufamba uku kuchazoshanda mumisika yemari, munyika nepanze. Buditsa kunze uye iwe uchaona marongero ako ekudyara anoenda zvirinani kwazvo kubva panguva dzino chaidzo.
Nemaitiro mune yepamusoro
Imwe mhinduro yematambudziko ako nemari idzi iri muchokwadi chekuti kukosha kuri pamusoro peaya mavhavha atakamboratidzira kwakanyanya kupfuura mamwe ese, kana kuti kwete kwete zvakanyanya. Kunyangwe ikadonha pazasi peiyo hapana kupokana kuti ivo vachazokwanisa kuve mune kujekesa kururamisa maitiro. Kwamunogona kuwana iwo mamwe masheya ane akawanda emakwikwi mitengo mazuva mashoma kana mavhiki anotevera. Mune imwe kana kumwe kusimba zvine chekuita nekuderera kwekudzika kwemitengo yavo mumisika uko izvi zviwanikwa zvemari zvakanyorwa.
Iko kunofanirwa kuve kuvhiyiwa kwaunofanirwa kuita zvakanyatsonaka nekuda kwenjodzi dzinosanganisirwa nerudzi urwu rwekudzika kufamba mune yakatarwa uye inosarudzika nzira. Hazvishamisi kuti iwe unofanirwa kupa yakakwira padanho reruzivo muchirongwa chinoshandiswa mune idzi dzakakosha mari kubva kune ese maonero maonero. Kwamunogona kurasikirwa nezvakawanda kana ukasaita mashandiro sezvaunoda kubva ikozvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 6 makiyi ekuvandudza mari